စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း - Hello Sayarwon
စိတ်ကျန်းမာရေး နဲ့ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းဆက်နွယ်မှုဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အငြင်းပွားစရာတစ်ခု ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျဖူးတာဟာ အမျိုးသမီးတွေကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နဲ့ ခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက် ပြသနာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ လူတော်တော်များများကာ အတွေးအမြင်ရှိကြပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျဖူးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ စိတ်ခံစားချက်နဲကိုယ်ခန္ဓါ ကျန်းမာရေးအတွက် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် ဒီဆက်စပ်မှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မရှင်းမလင်းဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆက်လက်လေ့လာ စစ်ဆေးရှာဖွေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျဖူးတဲ့ အမျိုးသမီးမှာ ဘယ်လို စိတ်ကျန်းမာရေးပြသနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရနိုင်သလဲ?
ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီး မမျှော်လင့်ထားတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးကျိုးတွေ ကြုံတွေ့ရပြီးနောက်မှာ အမျိုးသမီးအများစုဟာ ဘဝရဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ သူတို့အတွက် အခက်အခဲဖြစ်လာတာကို သိရှိလာခဲ့ပါတယ်။
ဒီကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတာဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးကို ထင်ထားတာထက်ပိုပြီး ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ မကောင်းတဲ့ပြသနာတွေထဲက အရေးကြီးဆုံးပြသနာက ကလေးဟာ အမြဲတမ်းရှင်သန်နေတယ် လို့ယုံကြည်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ဘဝဟာ မျိုးအောင်သွားတဲ့ အချိန်မှာ စတယ်လို့မယုံကြည်တဲ့သူတွေက ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲတွေကို ခံစားရသက်သာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့သူတွေက အချို့သော စိတ်ခံစားမှု(သို့) စိတ်အခြေအနေ အမျိုးအစားတွေကို ရင်ဆိုင်ရာမှာ ပိုပြီးခက်ခဲတတ်ကြပါတယ်။
– စိတ်ဆိုးဒေါသ ဖြစ်ခြင်း။
– အထီးကျန်သလို(သို့) သီးခြားဖြစ်နေသလို ခံစားနေရခြင်း။
– အိပ်မပျော်ခြင်း(သို့) အိပ်မက်ဆိုးမက်ခြင်း။
– ချစ်သူရည်းစား ပြသနာများ။
– သတ်သေဖို့ အတွေး၊ ခံစားချက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။
– အစားအသောက်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပြသနာတွေဖြစ်ခြင်း။
– စိတ်လှုပ်ရှား ပူပန်ခြင်း။
ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီးနောက်ဖြစ်လာတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းမလဲ?
· သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက်ကို သိရှိခြင်း နှင့် ခံစားချက်ကို ဖုံးကွယ်ထားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း။
ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာတတ်တဲ့ ပုံမှန် တုံ့ပြန်ခြင်း ဖြစ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးခြင်းဟာ တစ်ကယ်တော့ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အရမ်းကို အန္တရာယ်များပါတယ်။ အဲဒီစိတ်ဖိစီးနေ တာကို ဖုံးကွယ်မထားရပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်မဆောင်ချင်ဘဲ ကိုယ်ဝန် ရသွားတဲ့အခါ အမျိုးသမီးအများစုဟာ အခြားသူတွေနဲ့ ဝေးအောင်နေပြီး အခက်အခဲကို တစ်ဦးတည်းဖြေရှင်းခြင်း(သို့) တိတ်တိတ်လေး ဖုံးကွယ်ထားခြင်း ကို လုပ်ဆောင်လာတတ်ကြပါတယ်။ အဲလို ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာသင့် စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းပါဘူး။
ဒီလို အခက်အခဲတွေအတွက် သင့်မိသားစုကို မျှဝေပြီး သင့်လက်တွဲဖော်နဲ့ သင့်ကို ဂရုစိုက်တဲ့သူတွေနဲ့ အမြဲ ဆက်သွယ်နေရ ပါမယ်။ အဲလို အချိန်မှာ သီးခြားတစ်ယောက်တည်း နေလိုက်ခြင်းကပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ခံစားချက်တွေကို ဖုံးကွယ်ထားတာကလည်း အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ကောင်းတဲ့ နည်းလမ်း မဟုတ်ပါဘူး။
သင့်အဖော်၊ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း၊အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ သင့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို အမြဲတမ်း မျှဝေနိုင် ပါတယ်။ လေ့လာချက် အရ စိတ်ခံစားချက်တွေကို သက်သာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးတာက နာကြဉ်စရာကောင်းတဲ့ အရာတွေကို လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးပိုများစေနိုင်တယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
· စိတ်ဖိစည်းမှုတွေကို လျော့ချနိုင်ဖို့် နည်းလမ်းကို သင့်ဘာသာ ရှာဖွေ ထုတ်ဖော်ပါ။
သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးကို သင့်လောက် ဘယ်သူမှ မသိ၊ မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ စိတ်ပူပန်မှု၊စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို တည်ငြိမ်အောင် လုပ်ဖို့အတွက် ဝါသနာ အသစ်ရှာဖွေခြင်း(သို့) သင့်ကို တက်ကြွမှုတွေပေးနိုင်မယ့် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုခု ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းတွေ လုပ်ရပါမယ်။
ဥပမာ- လူတော်တော်များများက ကုသမှုပေးသူရှာဖွေခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အားကစားတစ်ခုခု ကစား လှုပ်ရှားခြင်း၊ အိမ်မွေး တိရိစ္ဆာန်မွေးခြင်း၊ ယောဂ ကျင့်ခြင်း၊ ဘုရားရှိခိုးခြင်း၊ တရားထိုင်ခြင်း၊ အခြားမိသားစုဝင်တွေနဲ့ အချိန်တော်တော်များများ အတူတူရှိခြင်းတွေကို ရှာဖွေလုပ်ဆောင် ကြပါတယ်။
ဆရာဝန်တွေနဲ့ အထူးကုတွေက ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျဖူးတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အတွက် စိတ်ကျန်းမာနေဖို့ အနည်းဆုံး ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုတဲ့ ဝါသနာ တစ်ခုခုလုပ်ဆောင်နေသင့်ပါတယ် လို့ အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းဟာ စိတ်ကျန်းမာရေးကို သက်ရောက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ အမှန်အကန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကျန်းမာရေးပြသနာတွေဟာ ကိုယ်ကျန်းမာရေးပြသနာတွေထက်ပိုပြီး အဖြစ်များတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျဖူးတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်း မကြာခင်(သို့) နောက်ပိုင်းမှာ စိတ်မကျန်းမာ ခြင်း ဖြစ်ကိုဖြစ်လာရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။
သို့ပေမယ့်လည်း ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့အများဆုံး နောက်ဆက်တွဲကတော့ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင် (သို့) သင့်လက်တွဲဖော်မှာ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီးနောက် စိတ်ကျရောဂါရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေတွေ့ရှိရပါက ဒီပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့နဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ကုသမှုနည်းလမ်းတွေရနိုင်ဖို့ စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်(ပညာရှင်)တွေနဲ့ ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Mental Health and Abortion. http://www.apa.org/about/gr/issues/women/mental-health-and-abortion.aspx. Accessed January 23, 2017.
Abortion Is Found to Have Little Effect on Women’s Mental Health. https://www.nytimes.com/2016/12/14/health/abortion-mental-health.html?_r=0. Accessed January 23, 2017.
Abortion and mental health: quantitative synthesis and analysis of research published 1995–2009. http://bjp.rcpsych.org/content/199/3/180. Accessed January 23, 2017.